Fampielezan-kevitry ny kandidà N° 25 : Hatomboka amin’ny fotoam-pivavahana -
AccueilRaharaham-pirenenaFampielezan-kevitry ny kandidà N° 25 : Hatomboka amin’ny fotoam-pivavahana
04/12/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Araka ny tetiandrom-pifidianana dia anio no hanomboka ny fampielezan-kevitra ho an’ ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa, tsy hitsahatra izany raha tsy ny faha-17 ny volana desambra izao. Hiavaka ny fanokafana izany ho an’ny kandidà laharana faha- 25, Marc Ravalomanana. Fiaraha-miombom-bavaka eny amin’ny foiben-toeran’ny KMMR mantsy no atao hitondrana am-bavaka ireo fandaharam-potoana rehetra.
Nambaran’ny talen’ny fampielezan-kevitry ny kandidà laharana faha-25, Rabenja Tsehenoarisoa, fa hanomboka amin’ny valo ora maraina dia hisy ny fitondrana am-bavaka ny fizotry ny fampielezan-kevitra etsy amin’ny foiben’ny KMMR etsy Bel’Air. Izany dia hanasan’izy ireo ny mpanohana an’i Marc Ravalomanana rehetra. Ilaina hoy izy ny fitondrana am-bavaka ny asa tanterahina. Aorian’izay kosa dia hisy ny fandraisam-pitenenana tanterahin’ i Marc Ravalomanana, entiny hitondrana toromarika amin’ny fizotran’ny fampielezan-kevitra hiaraha-manatanteraka. Aorian’ny kabary tanterahin’ i Marc Ravalomanana, dia hisy ny « carnaval » lehibe hitety ireo boriborintany miisa enina manerana an’Antananarivo.
Efa nisy ihany koa ny lamina napetraka isaka ny boriboritany, ary hanome ny toromarika rehetra amin’ny fametrahana ny fandaminana ny tompon’andraikitra, izay efa notendrena ho amin’izany. “Manentana antsika rehetra ny kandidà laharana faha-25 amin’izany fotoana izany, indrindra ny fifampitondrana am-bavaka ny fampielezan-kevitra hotanterahintsika” hoy ny fanamafisana sy ny fanentanana nataon’ny talen’ny fampielezan-kevitr’ity kandidà laharana faha-25 ity. “Manerana an’Antananarivo ny “carnaval’’, ka noho izany dia manentana ny rehetra izahay hanara-dia, ary ireo izay mitazatazana dia hotolorana kosa ny Manifesto” hoy hatrany ny fanazavany. Aorian’ny fanombohan’i Marc Ravalomanana ny fampielezan-kevitra eto Antananarivo, dia hitety ireo faritra sy distrika maro manerana ny Nosy ny tenany. Iaraha-mahalala anefa fa somary fohy ny fotoana nofaritan’ny lalàna hanaovana ny fampielezan-kevitra amin’izao fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa izao, tsy maintsy hisy araka izany ireo toerana tsy ho tratra. Nilaza anefa ny kandidà laharana faha-25, fa efa malahala izay olona heveriny fa tokony hitondra izao firenena efa reraky ny fahasahiranana sy ny fahantrana lalina izao izy.
Faradoboky ny K25 : “Lany Dada ah!!!”
“Lany Dada ah!!!”. Tomefy olona ary nangorom-potsy ny kianjaben’i Mahamasina. Tontosa soa aman-tsara, ny sabotsy 15 desambra teo, ny hetsika famaranana ny fampielezan-kevitra “Faradoboka” ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana. Voaporofo, araka iny hetsika “Faradoboka” ...Tohiny